I-condo yasolwandle ekhanyayo futhi enomoya eduze ne-boulevard - I-Airbnb
I-condo yasolwandle ekhanyayo futhi enomoya eduze ne-boulevard
I-ifulethi ephelele ibungazwe ngu-Jasmine
Siyakwamukela ku-condo yethu elula ne-airy edolobheni laseDumaguete. Leli fulethi lokulala eli-2 lilungele umuntu ohamba yedwa noma umbhangqwana, elinegumbi lokulala lesibili njengedeski nendawo yehhovisi yokusebenza ekhaya.
I-condo itholakala ngaphambi kwe-boulevard, inokubukwa kolwandle kanye nebanga lokuhamba ukusuka kumabha nezindawo zokudlela okuhlanganisa ne-Henry Resort entsha, kanye neminikelo yokudla ye-al fresco. IDowntown iyimizuzu emi-5 nje yokuhamba.
Ukuhamba ngemizuzu engu-7 ukusuka esikhumulweni sezindiza saseSibulan, kanye nemizuzu eyi-12 ukusuka esikhumulweni samabhasi.
Zonke izinto zikagesi zintsha sha - uzokwazi ukufinyelela iwasha, isitofu sasekhishini kanye ne-TV.
Ukujikijelwa kwetshe ukusuka kumabha nezindawo zokudlela ezingaphambili kwe-boulevard njenge-Cafe Racer, i-Hayahay ne-The Henry Hotel, kanye nezinketho zokudlela zangaphandle ezifana neNorth Pointe esanda kuthuthukiswa kanye neSifunda Sokudla.
Sicela uzizwe ukhululekile ukuxhumana nami nganoma yimiphi imibuzo mayelana nendawo noma amathiphu okuthi ungaya kuphi, kukho konke ukuhlala kwakho.